DECA ntụ ntụ-Nduzi Ntuzi Olee otú Mee Nandrolone Decanoate (Durabolin)
Ihe na 05 / 30 / 2019 by Mmmmmmmmmmmm dere na gallery.
Taa, ọtụtụ ndị na-ahụ maka ozu na-ahọrọ ka ndị na-agwọ ọrịa na-edozi ahụ na-eme ka ha nwee ike ịmalite ikpo ọkụ. Nandrolone Decanoate, nke a maara dị ka DECA, nke a na-ere n'okpuru aha aha ya bụ DECA-Durabolin, bụ otu n'ime steroid dị ike nke na-enye nsonaazụ dị egwu mgbe enwere ikike n'ụlọ. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ na ụlọ ọrụ ahụ, ị ​​nwere ike ịnọ na-eche ihe Deca Durabolin bụ na ihe ọ nwere ike imere gị. Ndị a bụ ụfọdụ atụmatụ Nandrolone Decanoate (DECA) nke mere ka ọ dị iche na ndị ọzọ.
Nandrolone Decanoate (DECA) bụ onye na-eme steroid nke na-adịghị ngwa ngwa, nke a na-emekwa ka ọ bụrụ ihe a ma ama. Kedu uru nke iji steroid dị nwayọ? Ogologo ndụ ahụ, ogologo oge ọ ga-ewe maka steroid ịhapụ ahụ. Ọzọkwa, nke a pụtara na usoro Nandrolone Decanoate ekwesịghị ịdị na-agakarị. Only ga-enyerịrị ọgwụ ogwu ka izu atọ gachara, n'adịghị ka ndị ọzọ ị nwere ike ịnweta ọgwụ ahụ kwa izu.
Enweghi ihe mgbu na nkwonkwo site na iji Nandrolone Decanoate ebe ọ na-achọpụta na ha dị mma mgbe niile.
Kwụpụ 1: Tụlee ntụ ntụ Nandrolone Decanoate n’ime beaker.
A bịa n’ị steroidsụ steroid, e nwere ụdị mmadụ abụọ; ndị na-azụta Nandrolone Decanoate maka ọrịre na ndị na-ahọrọ ụlọ ime ya site na Nandrolone Decanoate. N'iji ha abuo, enwere nani otu ihe; iji mepụta ahụ dị mma n'anya.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịhọrọ ịmịcha steroid n'onwe gị, mgbe ahụ ị kwesịrị ịnwa ịme ya n'ụzọ ziri ezi. Site na ịgbaso Nandrolone Decanoate Ntụziaka enyere na esi mee Deca, o yikarịrị ka ị ga-enweta nsonaazụ zuru oke. Ịgafe ma ọ bụ jiri obere ihe ma ọ bụ ihe mgbaze ma ọ bụ Nandrolone Decanoate ntụ ntụ nwere ike imetụta àgwà nke steroid gị.
N'ikwu eziokwu, site na iji akụrụngwa kwesịrị ekwesị na ihe ndị dị na ya, ị nwere ike ịchọta Nandrolone Decanoate nke ọma ma chọpụta ikike gị nwere.
Kedu ka Flibanserin si enyere nwanyị aka dị ka Mmekọahụ Mmekọahụ
Otu esi eji Trenbololone Ntụziaka na-ejikọ Trenbolone Enanthate ntụ ntụ	MK-677 (Ibutamoren) ọ na-arụ ọrụ nke ọma Maka Ọkpụkpụ akwara? Nyocha Sarm [NEW]